RAID रिकभरी सेवा – डाटा प्राप्त आक्रमण – डाटा प्राप्त सफ्टवेयर | RAID रिकभरी सेवा – डाटा प्राप्त आक्रमण – डाटा प्राप्त सफ्टवेयर
RAID रिकभरी सेवा – डाटा प्राप्त आक्रमण – डाटा प्राप्त सफ्टवेयर
हाम्रो बारेसंपर्कगोपनीयता नीतिखोज परिणामसाइट मानचित्र
के एक RAID रिकभरी सेवा समावेश गरिएको छ Posted on December 7, 2014March 6, 2015 by व्यवस्थापक	RAID प्राप्त सेवा
RAID प्राप्त सेवा – बजार मा आज शायद माग सेवाहरू सबैभन्दा एक छ. डेटा हानि को विचार यो सिर्फ एक फ्रीज गर्न एक दिन आफ्नो प्रणाली बारी गर्न सक्छन् कि बस यति दर्दनाक छ. यो आफ्नो डाटा भण्डारण आवश्यकताको कम्प्युटर लागि अपनाउँछन् गर्नेहरूको जीवन को दिन मा एक दैनिक समस्या भएको छ. तर राम्रो कुरा एक अझै पनि प्राप्त गर्न सक्छन् कि सेवाहरू छन्. अब, तपाईं को आवश्यकता हुनेछ जब एक RAID प्राप्त सेवा?
जाहिर, तपाईं आफ्नो RAID प्रणाली मा अचानक डेटा हानि अनुभव एक पटक तपाईं यो सेवा आवश्यक हुनेछ. RAID वास्तवमा डाटा सुरक्षित राख्न बनेको छ. उदाहरणका लागि, RAID मा 5, डाटा दर्पण द्वारा भागमा विभाजित छ. एक निश्चित डिस्क पागल जान्छ एक पल्ट, एउटै फाइल युक्त अन्य डिस्क उद्धार गर्न खडा हुनेछ. तथापि, प्रणाली आवश्यक हुनेछ जब एक समय आउनेछ RAID प्राप्त सेवा समस्या सम्पूर्ण एरे हिट भने. यस्तो फाइलहरू आकस्मिक मेटाउन रूपमा समस्याहरू, फाइल भ्रष्टाचार भाइरस ल्याएका, डेटा नोक्सानी र अधिक एक पूरी धेरै गर्न प्रमुख अचानक शक्ति आउटएज सेवा खाँचो सिर्जना.
अझै पनि पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ गुमाए डाटा यति दुर्व्यवहार छ यदि प्रश्न. यो सत्य हो, डाटा फिर्ता जाने छैनन् जब केही समय हुन सक्छ आफ्नो 100% सिद्ध फारम. यो क्षति हदसम्म ल्याएका सीमितता केही कारण छ. तर यो पूर्ण रूपमा मदत गर्न सकिन्छ.
RAID प्राप्त सेवा सामान्यतया समस्या सुधार गर्न सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन थियो. सफ्टवेयर प्रणाली भित्र फन्दामा डाटा पुन: प्राप्त गर्न डिजाइन गरिएको छ. किनभने यो सफ्टवेयर को बहुमुखी प्रतिभा को, सेवा पनि अनलाइन गर्न सकिन्छ.
सफ्टवेयर पनि मुक्त लागि डाउनलोड गर्न सकिन्छ. यद्यपि, सत्य अझै पनि RAID एक एक अकुशल हातले छोडेर जोखिममा भनेर कमजोर आउछ जान्छ. त्यसैले, डाटा प्राप्त लागि आवश्यकता सधैं एक विशेषज्ञ छोडेर गर्नुपर्छ. यो स्थायी डेटा हानि गर्न सक्छ कि प्रणाली थप क्षति रोक्न छ.
यो विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर सेवाहरू छन् भनेर थाह राम्रो छ. यी सेवाहरूको लाभ रूपमा, फेरि भइरहेको देखि डेटा हानि रोक्न एक जगेडा प्रणाली मागेर प्रयास गर्न कहिल्यै. प्रदान ज्यादातर कम्पनीहरु RAID प्राप्त सेवाहरू डाटा प्राप्त संग वास्तवमा सिपालु छन् तर पनि ग्राहकहरु लामो समयसम्म सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ भन्ने पक्का. जगेडा प्रणाली पनि स्थापित गर्नुपर्छ किन यो छ. यी प्रणाली कम्पनी नै स्थापित छन् र नियमित रूपमा जगेडा फाइलहरू क्रम मा प्रयोगकर्ता पहुँच गर्न सकिन्छ. यो फेरि मदत माग लागि आवश्यकता कम हुनेछ.
गुम्दा डाटा आजकल समय मा एक पटक आफ्नो प्रणाली अपंग सक्छ, अझै, पनि सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यसको लागि एक पूर्ण समाधान छ. विशेषज्ञहरु सोधेर छन् भन्ने मात्र कुरा यो बारे सीमित ज्ञान छ भने प्रयोगकर्ता प्रणाली ठीक गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने छ. तपाईंको सहायता भइरहेको अझ क्षति रोक्न को लागि आ विशेषज्ञहरु लागि प्रतीक्षा.
RAID प्राप्त सेवा
Posted in डाटा रिकभरी Raid, अन्य, RAID5डाटा रिकभरी, RAID रिकभरी सेवा Tagged डाटा प्राप्त आक्रमण, RAID5डाटा प्राप्त, आक्रमण डाटा प्राप्त, RAID प्राप्त सेवा, आक्रमण सर्भर डाटा प्राप्त, RAID array को ठीक, आक्रमण डिस्क रिकभर	Posts navigation
च्यानल	डाटा रिकभरी Raid
RAID5डाटा रिकभरी
RAID रिकभरी सेवा
Recent Posts	के एक RAID रिकभरी सेवा समावेश गरिएको छ
एक डाटा रिकभरी Raid कम्पनी मा के हेर गर्न
सबै तपाईं RAID थाह पाउनुपर्ने5डाटा रिकभरी
अनुवादपूर्वनिर्धारित भाषा रूपमा सेट& Nbsp; सम्पादन अनुवाद Kroll Ontrack द्वारा डाटा रिकभरी ब्लगHow to HandleaCorrupted Hard DriveNo Summer Break for Data LossAvoiding Data Loss in Windows 10 Creators UpdateUsers of Virtual Platforms are Victims of Data Loss Because of Their Own MistakesNew Petya Ransomware Strikes Around the GlobeHow to React When Your Data is Corrupted?How Kroll Ontrack Recovered the Data Stored on Space Shuttle Columbia’s Hard DrivesChoosing an IT Asset Disposal ProviderDouble Murder5G: The Fifth Generation of Mobile Network Communication Technology